Zanu PF Yokonzeresa Mhirizhonga muHarare Mapurisa Akatarisa
Kukadzi 07, 2011
Vechidiki vebato reZanu PF vanodarika zviuru zvishanu vaparadza zvitoro pamwe nekuba zvinhu zvanga zvichitengeswa zvakaita sehembe, mbozhanhare pamwe nemakombiyuta panzvimbo inotengeserwa zvinhu yeGulf mangwanani eMuvhuro
Vechidiki ava vanonzi vamuka chibhebhenenga vachimhanya vari muzvikwata zvikwata kubva kumuzinda weZanu PF uri kuna Fourth Street vachivhiringa vanhu muguta reHarare pamwe nekumanikidza vange vaine dzimotokari dzavo kuvatakura.
Vamwe vange vari pamusoro pedzimotokari, vamwe vakarembera nepamahwindo vachiimba dzimbo dzechimurenga pamwe nekurumbidza mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe.
Pavasvika paGulf vane misika ipapo pamwe nevashandi vavo vatiza vachivasiya vachiita zvavanoda.
Vanhu vane chitsama vakuvara apo pange pachipazwa mahwindo nevechidiki ava.
Mapurisa ange aripo haana kukwanisa kudzivirira vechidiki ava kuti vasaparadze midziyo nekuba zvinhu zvevanhu.
Vange vachitungamira vechidki ava vazovaudza kuti vadzokere kumahofisi avo kuna Fourth Street, asi zvitoro zvange zvatoparadzwa uye zvinhu zvakawanda zvabiwa.
Mumwe muzvina bhizimisi wekuNigeria audza Studio7 kuti abirwa zvinhu zvake zvese mapurisa akatarisa. Zvinhu zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora zvinonzi zvabiwa kana kuparadzwa uye vazhinji varamba kutaura nesu vachitya kuti vanogona kudzokerwa zvakare vevechidki veZanu PF.
Mutauriri wemapurisa muHarare, Inspector James Sabau, vanoti kusvika pari zvino mapurisa asunga vanhu vasere vanosanganisira dzimwe mbavha dzinozikanzwa chose mumusha weMbare uye pane zvimwe zvinhu zvange zvabiwa zvawanikwa nemapurisa.
Inspector Sabau vati vechidiki ava vange vapihwa mvumo yekunoratidzira pamuzinda wekanzuru yeHarare maererano nekusafara nekambani yekuSouth Africa yeEaspark iyo yakatora nzvimbo dzese dzekupakira motokari muHarare. Zvinonzi vanoti kambani iyi iri kudhurisira vanhu zvikuru.
Vati apo vange vachida kunochengetedza vanhu kuTown House, ndipo vazonzwa kuti kune chimwe chikwata change chave kutopaza nekuba kuGulf.
Vati mapurisa achiri kuongorora kuti zvafamba sei. Asi vamwe vanoziva nezvenyaya iyi vaudza Studio7 kuti vechidiki ava vakokorodza vanhu kuMbare mangwanani vachivaudza kuti vange vari kuda kunotora mabhizimisi ese ane vanhu vekunze zvikuru sei vekuNigeria.﻿
Mutauriri weMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaNelson Chamisa, vanoti Zanu PF inofanirwa kubuda pachena ichiudza veruzhinji kuti ndiyo yatumira nhengo dzayo kuti dzinokonzera mhirizhonga muHarare.
Mukuru weZimRights, VaOkay Machisa, vanoti mhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika dziri kuwanda munyika, zvikuru muHarare.